ကေအိုင်အို ဗဟိုအစည်းအဝေး မပြီးသေးတဲ့အတွက် အစိုးရနဲ့ မတွေ့ဆုံနိုင်
အစိုးရနဲ့ နိုင်ငံရေးအရ ဆွေးနွေးနိုင်ဖို့ ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ (KIO) က ပြီးခဲ့တဲ့လ အောက်တိုဘာ ၃ဝ ရက် တုန်းက တရုတ်နိုင်ငံ ရွှေလီမြို့တွေ့ဆုံပွဲမှာ သဘောတူခဲ့ရာမှာ ကေအိုင်အို ဗဟိုကော်မတီအဖွဲ့အတွင်း အရေးကြီးအစည်းအဝေး မပြီးပြတ်နိုင်သေးတာကြောင့်မို့ အခုလောလောဆယ် အခြေအနေမှာ အကြောင်းမပြန်နိုင်သေးဘူးလို့ စုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။
ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတွင် ကေအိုင်အို-ပလောင် လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် ပူးပေါင်းတပ်များနှင့် မြန်မာ အစိုးရတပ်အကြား ၂၀၁၂ ခုနှစ် မေလအတွင်း ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် တိုက်ပွဲအတွင်းကပုံ ဖြစ်ပါသည်။
Photo courtesy of Kachin Media
အစိုးရနဲ့ အခုတကြိမ်ဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာ နိုင်ငံရေး၊ စစ်ရေးအပြင် ပြည်သူလူထုနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ အရေးကြီးကိစ္စတွေပါ ဆွေးနွေးနိုင်ဖို့အတွက် အခုရက်ပိုင်းအတွင်း ကေအိုင်အို ဗဟိုကော်မတီအဖွဲ့အတွင်း အစည်းအဝေးကျင်းပဖို့ရှိရာ လက်စမသတ်နိုင်သေးတာကြောင့် အကြောင်းမပြန်နိုင်သေးတာဖြစ်တယ်လို့ ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးရေး အကျိုးဆောင်အဖွဲ့ (Peace-Talk Creation Group) က ဦးလမိုင်ဂွမ်ဂျာ က RFA ကို ပြောပါတယ်။
သမ္မတရုံးဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်းဦးဆောင်တဲ့ အစိုးရရဲ့ပြည်ထောင်စုအဆင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းကော်မတီနဲ့ ကေအိုင်အိုတို့ အခုလအတွင်းတွေ့ဆုံဖို့ကိစ္စ ဒီကနေ့ ၂၅ ရက်နေ့အထိ အတိအကျပြောဆိုလို့ မရနိုင်သေးဘူးလို့လဲ ဦးလမိုင်ဂွမ်ဂျာက ပြောပါတယ်။
အခုလ(နိုဝင်ဘာလ)အတွင်း တွေ့ဆုံမဲ့ကိစ္စကို ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးရေး အကျိုးဆောင်အဖွဲ့က ပြီးခဲ့တဲ့ကြာသပတေးနေ့က သမ္မတရုံးဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်းထံ စုံစမ်းတဲ့အခါ ကေအိုင်အိုရဲ့ အကြောင်းကြားမဲ့ရက်ကို စောင့်နေတာလို့ ဖြေကြားခဲ့ပြီး မနေ့မနက်ပိုင်း ကေအိုင်အိုဘက်က အကြောင်းပြန်တာက အစည်းအဝေးကိစ္စ မပြီးပြတ်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့သိရပါတယ်။
အစိုးရတပ်တွေနဲ့ ကေအိုင်အေတပ်တွေအကြား စစ်ရေးပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ တစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်း အစိုးရနဲ့ ကေအိုင်အိုတို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးနေကြတာဟာ ပြည်နယ်အဆင့်၊ ပြည်ထောင်စုအဆင့်အပါအဝင် အလွတ်သဘော ၃ ကြိမ်နဲ့ တရားဝင် ၇ ကြိမ်တွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
ငြိမ်းချမ်းရေးကော်မရှင်နဲ့ KIO တို့ တရုတ် ကူမင်းမှာတွေ့မည်
တရုတ်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နဲ့ မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ် ၄ ဖွဲ့လိုင်ဇာမှာ တွေ့ဆုံ
Kachin side can't accept any peacerocess because their money supproters most are related to religious didn't allow. If in peace, religious freedom will be accelerate under genuin human right and genuin doctrin will be win. No reasonable by nature law will be trouble. Innocent young people are lostion their lifes without will to die.
Nov 26, 2012 08:56 PM
နောက်တစ်ခါပြန်ဆွေးနွေးပွဲ ပြုလုပ်ဖို.အတွက် KIO မှ အလေးအနက် စဉ်းစားဖို.လိုလိမ်.မယ် စစ်အစိုးရဆိုတာ ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ.နောက်ကွယ်မှာ မြေခွေးကလိုက်စမြဲပဲ
I would like to know and hear the voice of Kachin brothers. What do they really want? Why can't they tell us about them. We would like to hear not only from KIA (Kachin Independence Army),but also from Kachin brothers. Then we can have correct decision and negotiation.
Nov 25, 2012 05:59 PM
နေရပ်- KALAW TOWN
Conquer meet to peace for soon.With deep wish require of nation case.
Nov 25, 2012 01:07 PM
တာကတော့စစ်ဆိုတာပြည်.သူတွေအတွက်တော့ ကောင်းကျိုးပေးတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဆိုတာလိုတိုင်းသိကြပါတယ်။အခုလို နှစ်ရှည်လများဖြစ်နေတဲ့စစ်ပွဲကိုရပ်ဖို. အဆုံးသတ်ဖို.တဖက်နဲ.တဖက်
Nov 25, 2012 08:14 AM